Bit By Bit - Ny fandinihana ny fitondran-tena - 2.4.3 Approximating fanandramana
Afaka manakaiky fanandramana fa tsy afaka atao. Fomba roa izay tena mandray soa avy amin'ny taona nomerika sy ny ara-boajanahary dia mitovy fanandramana.
Maro ny zava-dehibe sy ny politika ara-tsiansa fanontaniana dia causal. Andeha hodinihintsika, ohatra, ity fanontaniana manaraka ity: Inona no vokatry ny asa fanofanana fandaharana amin'ny karama? Ny fomba iray mba hamaliana izany fanontaniana izany ho amin'ny randomized fanandramana mifehy ireo mpiasa izay voatendry mba tsapaka na hahazo fampiofanana na tsy handray fampiofanana. Avy eo, mety Tombanan'ny mpikaroka ny vokatry ny fampiofanana ho an'ireo mpandray anjara amin'ny alalan'ny fotsiny mampitaha ny karama ny olona izay nandray ny fampiofanana ho an 'ireo izay tsy nandray izany.
Ny kely saina dia manan-kery fampitahana noho ny zavatra izay mitranga eo anoloan'ny nanangona antontan-kevitra mihitsy aza: ny randomization. Raha tsy misy randomization, ny olana dia be trickier. Ny mpikaroka afaka mampitaha ny karama ny olona izay nanao sonia an-tsitrapo ho an'ny fampiofanana ho an 'ireo izay tsy sonia-up. Izany fampitahana mety mampiseho fa ny olona izay nahazo fampiofanana Nahazo bebe kokoa, fa tena izany dia noho ny fampiofanana sy ny tena izany dia satria olona sonia-ho fiofanana dia hafa noho ireo izay tsy sonia-ho fiofanana? Amin'ny teny hafa, no tsara tarehy ny mampitaha ny karama ireo vondrona roa ny olona?
Ahiahiny momba ny ara-drariny io fampitahana mpikaroka sasany dia mitarika ny mino fa tsy misy azo atao ny manao causal ny vinavinan'ny tsy mandeha fanandramana. Zavatra tsy milaza mandeha lavitra loatra. Marina fa fanandramana manome porofo matanjaka indrindra ho an'ny causal vokany, misy tetika hafa izay afaka manome ny vinavinan'ny causal sarobidy. Raha tokony hieritreritra hoe causal vinavina dia na mora (ao amin'ny raharaha ny andrana) na azo atao (eo amin'ny raharaha fotsiny nahita tahirin-kevitra), fa tsara ny mieritreritra ny paikady ho an'ny fanaovana causal vinavina mandry nanaraka ny fitohi- avy mahery mba malemy indrindra (Sary 2.4). Tamin'ny faran'ny mahery fitohi- dia randomized fanandramana. Nefa, ireo matetika no sarotra ny manao fikarohana ao amin'ny fiaraha-monina, satria maro be ny fitsaboana mifanaraka amin'ny zava mitaky ny fiaraha-miasa avy amin'ny fitondram-panjakana na orinasa; tena fotsiny misy fanandramana maro fa tsy afaka atao. Dia hanokana rehetra Chapter 4 ho na ny tanjany sy ny fahalemeny ny randomized fanandramana, ary aho hilaza fa amin'ny toe-javatra sasany, dia misy antony mahery etika mba kokoa observational ny fanandramana fomba.
Sary 2.4: Continuum ny fikarohana tetika ho tombanana causal vokatry.
Mifindra teny fitohi-, dia misy toe-javatra izay tsy mazava mpikaroka randomized. Izany hoe, ny mpikaroka no miezaka hianatra andrana-toy ny fahalalana tsy misy tena manao ny fanandramana; Mazava ho azy, izany dia tsy maintsy mamitaka, nefa lehibe kokoa angona indrindra ny fahafahantsika manao causal vinavina ao amin'ny toe-javatra ireo.
Indraindray dia misy toe-javatra izay randomness mitranga eto amin'izao tontolo izao mba hamorona zavatra tahaka ny fanandramana ny mpikaroka. Ireo teti-dratsy voajanahary Antsoina hoe fanandramana, ary ireo no hodinihintsika amin'ny an-tsipiriany ao amin'ny Section 2.4.3.1. Lafiny roa ny angon-drakitra lehibe loharanom-ny foana-eo amin'ny natiora sy ny habe-be Mampitombo ny fahafahantsika mba hianatra avy amin'ny voajanahary fanandramana rehefa mitranga.
Mifindra bebe kokoa hiala randomized fanandramana, indraindray tsy misy na zava-nitranga iray eo amin'ny natiora izay azontsika ampiasaina mba manakaiky voajanahary fanandramana. Amin'ny toe-javatra ireo, dia afaka hanorina fampitahana tsara ao anatin'ny tsy fanandramana angon-drakitra tao amin'ny ezaka mba manakaiky ny fanandramana. Ireo teti-dratsy Antsoina hoe mifandraika, ka Hodinihina amin'ny an-tsipiriany ao amin'ny Section 2.4.3.2. Toy voajanahary fanandramana, mifandraika dia famolavolana izay ihany koa ny soa avy amin'ny angon-drakitra lehibe loharano. Indrindra indrindra, ny goavana habe-na eo amin'ny lafiny maro ny tranga sy ny karazana-baovao isaky ny raharaha-be manamora ny mifandraika. Ny manan-danja samy hafa voajanahary fanandramana sy ny mifandraika moa iny an voajanahary fanandramana ny mpikaroka mahafantatra ny fomba fitsaboana amin'ny alalan'ny izay efa voatendry, ary mino azy io ho kisendrasendra.
Ny foto-kevitra ny fampitahana ara-drariny izay nanosika ny faniriana hanao fanandramana ihany koa no fototry ny roa hafa manakaiky: voajanahary fanandramana sy mifandraika. Ireo fomba dia hanampy anao mba maminavina fotsiny causal vokatry avy amin'ny tahirin-kevitra amin'ny alalan'ny mahita nahita fampitahana ara-drariny nipetraka tao amin'ny tahirin-kevitra izay efa manana.